काेराेना त्रास: मन्त्रीज्यू ! सान्त्वना त दिनुहोस्
Thursday,02 April, 2020 | बिहीबार, २० चैत, २०७६
समाचार राेजगार स्वास्थ्य
रमेश भारती काठमाडौं, ४ चैत
कतारमा रोजगारीमा कार्यरत झापाका विकास गिरीसँग भारत र बङ्गलादेशका नागरिक पनि काम गर्छन् । भारत र बङ्गलादेशका कामदारको कतारमा रहेका कूटनीतिक नियोगले बारम्बार उनीहरूका विषयमा जानकारी लिइरहेको कतारबाट गिरीले बताएका छन् । कतारमा कार्यरत नेपालीहरूलाई भने त्यहाँ रहेको राजदूतावासमा सम्पर्क गर्दा कहिल्यै फोन नउठाउने गरेको उनले गुनासो गरे ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सान्त्वनासमेत दिन नसकेको गिरीको पनि गुनासो छ ।
यस्तै, सिरहाका राजन यादव पनि सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला विदेशमा रहेका नेपालीलाई सान्त्वना दिन नसकेको यूएईबाट बताउँछन् । यस्तो महामारीका बेला राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कस्तो गर्दै छ भन्ने आस र चासो हुने राजनको भनाइ छ ।
उनीसँगै यूएईमा कार्यरत अन्य देशका कामदारलाई घर फर्कन चाहे तत्काल ती देशका सरकारले फर्काउन आश्वासन दिइरहेको यादवले जानकारी दिए ।
उनीहरू जस्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकले कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै ठूलो आस सरकारसँग राख्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् । आपतविपत र महामारीका बेला सबै नागरिकको आस राज्यसँग हुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । महामारी जस्ता आपतविपतमा सरकारले सुरक्षा गरोस् भनेर जनताले कर तिरेको डा. गुरुङको भनाइ छ ।
‘विदेशमा रहेका श्रमिकलाई त झन् राज्यको आवश्यकता हुन्छ । उनीहरूले राज्यसँग धेरै कुरामा आस गर्छन् । त्यही भएर राज्यले विदेशमा नियोग खडा गरेको हो’, उनले भने, ‘श्रमिकसँग त झन् अन्य देशका कामदार जोडिएकका हुन्छन् । अन्य देशले आफ्ना नागरिकलाई गरेको व्यवहारले उनीहरूमा आफ्नो राज्यले पनि त्यस्तै गरे हुन्थ्यो भने आस हुन्छ ।’
यस्तो सङ्कटका बेला राज्यको धेरै आवश्यकता परिवार र देश नै छाडेर बसेका नागरिकमा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गएको ४ दशकमा करिब साढे ६१ लाख वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा २०५० सालदेखि हालसम्म साढे ६१ लाख नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा भारतबाहेकका देशमा पुगेका देखिन्छ ।
सरकारले संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने श्रमिकको वास्तविक तथ्याङ्क छैन । हाल वैदेशिक रोजगारीमा कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । श्रम मन्त्रालयले अनुमानका भरमा मुख्य रोजगारदाता देशमा ४४ लाख र भारतसहित अन्य देशमा ३० लाख श्रमिक रहेको बताउँदै आएको छ ।
श्रम मन्त्रालयकै अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने भारतसहित ७० लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । नेपालबाट धेरै भारत हुँदै रोजगारीका लागि तेस्रो देश जाने गरेका कारण पनि सरकारसँग विदेशिने नेपालीको वास्तविक तथ्याङ्क नरहेको हो ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक कोरोना भाइरसको त्रासमा छन् । यी श्रमिकले अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् । विश्वमा तीब्र गतिमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका नेपाली श्रमिकले राज्यसँग धेरै होइन, सान्तवनाको अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् ।
विश्वमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै कतिपय रोजगारदाता देशमा रहेका नेपाल श्रमिक स्वदेश फर्किन खोजे पनि पाएका छैनन् । घर बिदामा आउन कम्पनीसँग छुट्टी लिएर टिकट काटेका कति नेपाली रोजगारदाता देशमै रोकिएका छन् । यस अवस्थामा श्रमिकले श्रम र रोजगारी क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त मन्त्रालय सम्हालेका श्रममन्त्रीले दिने अभिव्यक्तिले धेरैलाई सान्त्वानसँगै आश्वासन हुने ती श्रमिकको भनाइ छ ।
‘सरकार ! फिर्ता होइन, सान्त्वना दिए पुग्छ’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रमिकलाई सान्त्वना दिन नसकेको देश, विदेशमा कार्यरत श्रमिकको गुनासो छ । विदेशमा कोरोनाको त्रासमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले समेत सान्त्वना दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
श्रम मन्त्रालय नियोगसँग सम्पर्कमा छ : मन्त्री यादव
सरकारले रोजगारदाता देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै ती देशमा कार्यरत नेपालीको अवस्था नियमित बुझिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई कोरोना भाइरसबाट बच्न र नियोगमार्फत् सचेतनात्मक कार्यक्रमसमेत गरिरहेको मन्त्री यादवले बताए ।
‘श्रम मन्त्रालय मात्र होइन, सरकार नै कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई समेत रोजगादाता कम्पनीमा आफूले पठाएका श्रमिकको अवस्था बुझ्न आग्रह गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा स्वास्थ्य उपचार गर्ने विषय समेटेको हुन्छ । सोहीअनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कोरोना जस्ता महामारीको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।’
श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले दैनिक कोरोना प्रभावित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत् विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा जानकारी लिइरहेको श्रममन्त्री यादवले जानकारी दिए । नेपाली नागरिकलाई समस्या पर्दा राज्य कहिल्यै पनि रमिता हेरेर नबस्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन, नेपालभित्र विभिन्न क्षेत्रमा करिब ३३ लाख श्रमिक कार्यरत छन् । सरकारले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशभरमा ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको देखाएको छ । यी प्रतिष्ठानले ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।
नेपालभित्र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू कोरोना भाइरसको त्रासमा छन् । नेपालमा भारतसहित अन्य देशका कारिब ११ लाख विदेशी श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा कार्यरत छन् । नेपालमा रोजगारीका लागि आएका विदेशी श्रमिकको सम्बन्ध पनि श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार र अन्य सुरक्षाको जिम्मा रोजगारी अवधिभर नेपाल सरकारकै हुन्छ । उनीहरूका विषयमा हालसम्म श्रम मन्त्रालयले केही योजना अघि सारेको छैन ।
विदेशबाट नेपाल आएर रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकका विषयमा सरकार गम्भीर छ । विदेशी श्रमिकलाई कोरोना भाइरसबाट बच्न उनीहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीलाई सरकारले सचेत गराइरहेको श्रममन्त्री यादवले जानकारी दिए । रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी नागरिकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिए नेपाल सरकारले उपचार गर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६, ०६:२८:००
कर्णालीमा कोरोना परीक्षण गरिएका ४ जनाको रिपोर्ट 'नेगेटिभ'
लकडाउनले ज्यालादारी श्रमिकलाई ठूलो मार परेको छ
सप्तरीबाट ९ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि धरान पठाइयो
कोरोना कहर : वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४० प्रतिशत श्रमिक कटौती
कतारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका श्रमिकको पूरा तलब दिने
कोरोना कहर : भारतमा ३ हजारभन्दा बढी नेपाली बाटोमा अलपत्र
सुरक्षा गार्डलाई कार्यक्षेत्र र घरसम्म आउनजान समस्या
प्रदेश २ मा ५० वटा भेन्टिलेटर र २ वटा पीसीआर थप्न निर्देशन
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गडबडी : उपप्रधानमन्त्री पोखरेलविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजरी
कोरोना उपचार कोषमा एक अर्ब सहयोग
बूढीगंगा नदीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु
बाबुराम मृत्यु प्रकरणः कांग्रेस र महिला संघद्वारा छानबिन र क्षतिपूर्ति माग
लकडाउनका बीच योजना आयोगको बैठक, बजेटमा नीतिगत छलफल चलाउने
कोरोना रोकथाम कोषमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ८५ लाख सहयाेग
आईसोलेसनमै ज्यान गुमाएका बाबुरामको यस्तो थियो श्रीमतीसँगको अन्तिम संवाद
बाबा रामदेवको दाबी : गुर्जोको रस पिउँदा कोरोना संक्रमण ठीक हुन्छ
१२ वर्षीय बालकका लागि भारत–पाकिस्तानले सबै ‘प्रोटोकल’ तोडे
लकडाउन पुनः १ साता थपिँदै
टेक्सासमा बसेर टेकुमा मान्छे मरेकाे हल्ला फैलाउने काे ?
युरोपको एक मात्र देश, जहाँ छैन कोरोना भाइरसको डर
कसले देख्ने यी भोका बाँदरको पीडा ?